Mazda ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အဝေးထိန်းသော့ Mazda စက်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့သူများအတွက် China Remote key
Mazda5အတွက်ခလုတ်ခုံ ၃၁၃.၈ MHZ ပါ
Mazda5အတွက်ခလုတ်ခုံ ၃၁၃.၈ MHZ အတွက်
313.8MHZ ဖြင့် Mazda53 + 1 ခလုတ်ခလုတ်ခလုတ်အတွက်
313.8MHZ နှင့်အတူ ForMazda53 + 1 ခလုတ်ကိုဝေးလံခေါင်သီသော့ခတ်
Mazda3အတွက် M3 M5 M6 အဝေးထိန်းခလုတ်ခလုတ် ID83 4D63 transponder ချစ်ပ်3M3 M5 M6 Uncut Blade
Mazda အတွက် M3 M5 M6 အဝေးထိန်းခလုတ်ခလုတ်ခုံခေါင်း ID83 4D63 Transponder Chip Mazda အတွက်36 M3 M5 M6 Mazzda ဝေးလံခေါင်ဖျားသော့ခတ်အတွက် Blade key head - 4d63 chip ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားသော့အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ BMW / FOR Acura / FOR Alfa / FOR Audi / Benz အတွက် / BMW အတွက် / Buick FOR / Cadillac FOR / Chevrolet FOR / FOR Holden / Chrysler / FOR Citroen / Ford / Fiat / GM / FOR Honda / FOR Hyundai / Kia / FOR Landrover / FOR Lexus / FOR Mazda / FOR Maserati / Mitsubishi FOR / Nissan FOR / Opel FOR / Peugeot FOR / Porsche FOR FOR Renault / FO ...
3/4 Button Key Case အိတ်အတွက် Mazda အတွက် 315Mhz ခေါက်သိမ်းနိုင်သော Fob356CX-7 CX-9 MX-5 Miata BGBX1T478SKE125-01 4D63 Chip Fob
အခြေအနေ: 100% Brand New အရောင်: Black Button: 3/4 ခလုတ်များအဓိက blank: Yes ကြိမ်နှုန်း: 315 mhz ချစ်ပ်: ID63-80bit အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်: ဟုတ်ပါသည်ဘက်ထရီ - ရှိသည်။ (Aliepxress Sandard သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသာရွေးချယ်ပါ။ ဘက်ထရီပါဝင်သည်) တပ်ဆင်မှု - အတွက်အလုပ်လုပ်သည် Mazda အတွက်ခလုတ်သုံးခု CX-7 CX7 2009 2010 2011 Mazda အတွက်32011 2012 2013 2014 2015 Mazda အတွက်52011 2012 2013 2014 2015 Mazda အတွက်ခလုတ် ၄ ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်း Mazda3အတွက် 2005 2005-2013 အတွက် Mazda62005-2013 - Mazda52006-2012-2012 အတွက် Mazda CX-7 ၂၀၀၇-၂၀၀၂ အတွက် Mazda CX-9 200 ...
Mazda3BK Series အတွက် ၂၀၀၆-၂၀၀၉ အတွက် 433Mhz 4D63 Chip ကားအဝေးထိန်းခလုတ်သည်ခလုတ်ခုံ ၂/၃ ခလုတ်
ဖော်ပြချက်အခြေအနေ: ၁၀၀% အသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းအမည်: ကားသော့ခလုတ်ခလုတ် ၂/၃ ခလုတ်ကြိမ်နှုန်း： 433Mhz Key Blank: ဟုတ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်ပြား: ဟုတ်ပါသည်။ ဘက်ထရီ - ဟုတ်ပါသည်။ Aliexpress အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ရောင်းရန်တားမြစ်သည်။ ) Fit: Mazda3BK Series2၂၀၀၆-၂၀၀၉ အတွက် Mazda BT50 2006 - 2019 ဖော်ပြချက်: ကုန်ပစ္စည်းတွင်အဓိကကျသည့်အိမ်၊ ဓါး၊ တိုက်ဘုတ်၊ ချစ်ပ်နှင့်ဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးမှတ်စု: ၁။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့် r ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ ...
Mazda M6 မော်ဒယ်အတွက်2Button Remote Control Key Fob 313.8MHZ 315MHZ 433MHZ မရှိ visteon 41840
3 Button Smart key ဒီပစ္စည်းမှာ key shell၊ circuit board, battery တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဒီဟာကသော့တစ်ချောင်းပါပဲ သင့်လျော်သော: Mazda M6 ပရိုဂရမ်အတွက်သင်ဤသော့ခတ်ခြင်းကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောမော်တော်ယာဉ်သော့ခတ်သူတစ် ဦး ကစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဓိကကုန်သည်များသည်သူတို့သာပရိုဂရမ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် aftermarket သော့များကိုပရိုဂရမ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားသော့အမျိုးမျိုးကို BMW / FOR Acura / Alfa FOR / Audi FOR / Benz / BMW / Buick / Cadillac FOR / Chevrolet FOR / FOR Holden / Chrysler / FOR Chrysler သို့သော့အမျိုးမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကားသော့ M3 / M5 / M6 Mazda6စီးရီးအလိုအလျောက်အတွက်သော့ခတ်စမတ်ခလုတ် ၂ ခလုတ်အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု 434mhz 315mhz
ပစ္စည်းအမည်: ကားသော့ခလုတ်: ၂ ခလုတ်ကြိမ်နှုန်း： ၃၁၅ / ၄၃၃ MHz အဓိကသော့ချက် - ဟုတ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်အဖွဲ့ - ဟုတ်သည်ဘက်ထရီ - ဟုတ်ကဲ့။ Transponder ချစ်ပ် - ဟုတ်ပါတယ် (4D63 Chip) အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ် / စတစ်ကာ: အမှတ် (Aliexpress အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူရောင်းရန်!) Fit: Mazda3အတွက် Mazda5အတွက် Mazda6အတွက်ဖော်ပြချက် - ထုတ်ကုန်တွင်အဓိကကျသည့်အိုး၊ ဓါး၊ တိုက်ဘုတ်၊ ချစ်ပ်နှင့်ဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားသော့အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ BMW၊ FOR Acura / Alfa FOR / Audi FOR / Benz / BMW / Buick / FOR Cadillac / FO ...
၂/၃/၄ ခလုပ်များ Mazda အတွက်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခေါက်သိမ်းထားသောခေါက်နားခေါက်ခလုတ်ခုံ2356 M6 MX5 CX5 CX7 CX9 RX8 Uncut Blade Key Head နှင့်အတူ
2/3/4 Mazda အတွက်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခလုတ်များ Remote Key Case Fob Shell Flip ခေါက်သိမ်းနိုင်သောပစ္စည်းများ3356 M6 MX5 CX5 CX9 CX9 RX8 ဖြတ်မရသောဓါးခေါင်းနှင့်အတူပစ္စည်းအမည်: Mazda အတွက် ၂ ၃ ၅ ၆ M6 MX5 CX5 CX7 CX9 RX8 ကားသော့အလေးချိန် - ၄၀ ဂရမ် ခလုတ်များ - ၂/၃/၄ ခလုတ်ခုံ: မဖြတ်ရသေးသော Blade ကားအမှတ်တံဆိပ်စတစ်ကာ: Transponder Chip: Package List မရှိပါ - ၁ * Key Shell ထူးခြားချက်များ - ၁၀၀% အသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်! 1 - Mazda key အတွက်သင့်လျော်သောသင်၏ဟောင်းနွမ်းသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော case ကိုအစားထိုးရန်။ Remote Smart Key အသစ်ကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ ၂ - သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ...
၂/၃ Button စမတ်ကဒ် Remote Key Fob 433Mhz ID49 Chip Mazda3CX-5 CX-3 Axela အရေးပေါ်သော့ခလောက်နှင့် SKE13E-01 / SKE13E-02
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အညွှန်းကိန်း ၁၀၀% အသစ် & အရည်အသွေးမြင့် & လက်ကားများခလုတ်များ - ခလုတ် ၂ ခုကြိမ်နှုန်း - ၄၃၃ MHz Transponder ချစ်ပ် - ID49 ချစ်ပ် Blade: YES ပုံစံ - SKE13E-01 / SKE13E - 02 (ရည်ညွှန်းအတွက်) - Mazda CX-5 2015- အတွက် 2018 Mazda32015-2018 နှင့်အခြားမော်ဒယ်များအတွက်… Circuit board / chip / battery နှင့်ပြည့်စုံသော key အသစ်။ သော့ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်တော်ယာဉ်သော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည် သော့ကိုဓါးလည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မ ၀ ယ်ခင်သတိပေးချက် - PLS ...